true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 3 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Ukuze wenze uphenyo olunembile, kufanele ube nokuqonda okuhle kakhulu kokuqonda kanye nezinhlobo ezahlukahlukene zama-outpoints kanye nama-pluspoints. Ukuba nalezi njengesisekelo sakho, usebenzisa izinyathelo ezimbili ezijwayelekile ukuze “uthole ukuthi kwenzekani ngempela.” Lezi zinyathelo yilezi:
Ukusebenzisa idatha ihlaziyiwe ukuhlaziya isimo.
Idatha ichazwa njengamaqiniso, amagrafu wezibalo, izitatimende, izinqumo, isenzo nezincazelo, okuyiqiniso.
Isimo sichazwa njengendawo ebanzi evulekile lapho umzimba wedatha yamanje ukhona.
Isibonelo, ukwehla kwezibalo zenombolo yama-computer amasha esitolo sokuthengisa i-computer kungaba yisimo.
Ukuhlaziya kusho ukuhlola noma ukutadisha okuthile ngokucophelela nangokuningiliziwe ukuze ukuqonde kangcono. Lapho wenza uphenyo, imininingwane kanye nalesi simo ziyahlaziywa futhi nansi indlela okwenziwa ngayo lokhu.
Indlela yokuhlaziya idatha ukuqhathanisa into ngayinye nedatha futhi ubone ukuthi kukhona yini kulezo evela kwidatha. (Isibonelo, isitatimende okumele sibe iqiniso empeleni siphenduka amanga, okuyi-outpoint, ngamanga.)
Indlela yokuhlaziya isimo ukuthatha ingxenye ngayinye yezingcezu zedatha ezihlaziywe ngenhla bese unikeza iphuzu ngalinye kumuntu noma engxenyeni yendawo engaphansi kwayo. (Isibonelo, uma uBill kunguye umuntu owasho la manga angenhla, leyo-outpoint ibekwa igama likaBill.) Lapho yonke idatha isihlaziyiwe, bala ama-outpoints ukuze ubone ukuthi ama-outpoints amaningi abekwe kuphi.
Ukwenza lokhu kukunika izindawo noma abantu bamaphutha amakhulu kakhulu noma ukungahleleki. Iphinde ikunikeze izindawo ezisebenza kahle kakhulu, okuzoba yizindawo ezinenani encane yama-outpoints.
Isibonelo, kunenkinga Kuphiko Lweziphuzo. Kukhona abantu abathathu kuyunithi. Ukwenza ukuhlaziywa kwedatha kuyo yonke indawo kusinikeza ama-outpoints aminingi. Bese sikunikeza abasebenzi u-A, B no-C abasebenza kuyunithi. Masithi uma uphenyo seluqediwe, uthola ukuthi u-B wayenama-outpoints amaningi. Lokhu kukhombisa ukuthi inkinga ese-Refreshment Unit iku-B. B ungasingathwa ngezindlela ezahlukahlukene, njengokumqeqesha ngemisebenzi yomsebenzi wakhe, ukumenza ukuthi afike emsebenzini ngesikhathi, njll. Qaphela ukuthi sihlaziye idatha yendawo enkulu. Sibeke ucezu ngalunye lwedatha ezigabeni ezincane endaweni. Ngokubona ukuthi yisiphi isigaba esiveza ama-outpoints amaningi, sabe sesiba nesimo esihlaziyiwe futhi sakwazi ukuthi sizokwenzenjani ukusiphatha lesi sigaba.
Isibonelo, sihlaziya yonke idatha esinayo mayelana ne-Bingo Car Plant. Thina sabela idatha ngaleyo ndlela okuhlaziyiwe njengama-outpoints ezinyathelo omsebenzi ngamunye we-Bingo Car Plant. Ngakho ke sikhomba ukuthi yikuphi ukusebenza okubi kakhulu. Sibe sesiphatha lowo msebenzi ngezindlela ezahlukahlukene, ikakhulukazi ngokuwuhlela nangokuqeqesha abaphathi bawo kanye nabasebenzi.
SIBHEKA UKUHLAZIYWA KWESIMO NGOKUHLAZIYA YONKE IDATHA ESINAYO FUTHI SABELA IDATHA YE-OUTPOINT EZINDAWENI NOMA EZINGXENYENI. INDAWO ENAMA-OUTPOINTS AMANINGI IYONA INDAWO OKUMELE ILUNGISWE.
Uma sibheka isimo esibanzi okufanele sisingathwe, vele sinenkinga yokuthola ukuthi kuyini okungalungile ngaphambi kokuthi siyilungise. Izinyathelo zokuhlaziya idatha ezilandelwa ezokuhlaziya isimo yizinyathelo okufanele uzisebenzise ekutholeni ukuthi yikuphi okungahambi kahle.
Lokhu sikwenza ngokuqhathanisa yonke idatha ngokumelene nemiphumela (ama-illogics). Manje sinohlu olude lwama-outpoints. Lesi yisinyathelo sokuhlaziya idatha.
Sihlela ama-outpoints esinawo manje ezindaweni eziphezulu zesigameko. Ama-outpoints amaningi azovela endaweni eyodwa. Lesi yisinyathelo sokuhlaziya isimo.
Manje sesiyazi ukuthi iyiphi indawo okumele isingathwe.
Isibonelo, idatha engamashumi ayisikhombisa ikhona endaweni yesehlakalo. Sithola amashumi amabili nanye kule datha ukuthi awanamqondo. Lokhu ngama-outpoints. Sifaka ama-outpoints angamashumi amabili nanye ezindaweni eziqhamuka kuzo noma esisebenza kuzo. Abayishumi nesithupha bavela endaweni ewu-G. Sisingatha indawo u-G.
Ingxenye ephawulekayo yokuzivocavoca okunjalo ukuthi ngenkathi kungathatha usuku ukuqeda ukuhlaziywa kwedatha, lokhu kuqhathanisa nesipiliyoni sezinyanga ezintathu zokusebenza. Ngakho ke ukuhlaziya Idatha nesimo kungumphumela osheshayo lapho isipiliyoni sithatha isikhathi esiningi.
Umuntu uthola ukucutshungulwa kwesimo ngokuhlaziya yonke idatha eyodwa anayo futhi abele ama-outpoints ezindaweni noma kubantu. Indawo noma umuntu onama-outpoints amaningi ukhombisa lapho ukulungiswa okudingeka khona.
Ukuhlaziya idatha kwenziwa kahle kangakanani kuncike ekutheni umuntu owenza uphenyo uyazi kahle kangakanani inhlangano ne-purpose umsebenzi osuselwe kuwo. Lokhu kusho ukuthi umuntu kufanele azi ukuthi yimiphi imisebenzi yayo okufanele isuke kumbono oqondile (ofanelekile), noma onengqondo.
Isibonelo, iwashi kufanele ligcine ukusebenza futhi libonisa isikhathi futhi libe wukwakheka okusebenzayo futhi okuhle. I-factory yamawashi kufanele yenze amawashi. Kufanele kukhiqizwe amawashi anele ashibhe ngokwanele alungile ngokwanele ukuba amakhasimende afune ukuwathenga. Futhi amawashi kufanele athengiswe ngemali eyanele ukuze i-factory yamawashi iqhubeke nokusebenza.
I-factory ithenga izinto ezokwakha amawashi ngazo. Ilungisa ibuyisele amathuluzi ayo nemishini yayo. Iqasha abasebenzi ukuthi benze amawashi nabaphathi ukuze babhekele umsebenzi owenziwayo e-factory. Inezinkampani ezincane ezisingatha ukulungiswa kwamawashi. Lezi zitholakala ezindaweni ezikude ne-factory. Futhi inezinye izinkampani ezithengisa amawashi ezinhlotsheni ezinkulu zezitolo, lapho abantu bengahamba beyowathenga.
Konke okungenhla kukhombisa ukuthi kuchazwa ini ngesakhiwo “esi-ideal” senkampani yewashi nenhlangano yayo.
Lawo maphuzu anengqondo futhi anomqondo. Yizinto okumele zenzeke futhi uma kunjalo, lokhu kukhombisa ukuthi i-factory yewashi isebenza kahle futhi izokwazi ukuqhubeka isebenze.
Uma sibheka idatha yangempela yamanje enkampanini yamawashi, singabona ama-outpoints bese sihlaziya idatha. Isibonelo, uma inkampani kufanele ukuthi ithole izinto zokwenza amawashi ngayo, kepha lezi zinto azikafiki, lokhu kuzoba i-outpoint, amaqiniso aphikisayo.
Umuntu unikeza ama-outpoints kukho konke njengokuhlaziywa kwesimo. Kulesi sibonelo, izinto zokusebenza azange zilethwe ngoba umuntu ophethe inkampani imali ukhohliwe ukukhokhela umphakeli othumela izinto. Ngakho ke le-outpoint inikezwe umuntu ophethe imali.
Uma konke ukucutshungulwa kwedatha nokuhlaziywa kwesimo kuphakama amanye ama-outpoints ngalo muntu, lokho kukhombisa ukuthi ngubani odinga ukulungiswa.
Umuntu usebenzisa ukwazi kwakhe nekhono lakhe kwezokuphatha (izenzo ezibandakanya ukuphatha noma ukuhlela ihhovisi, inhlangano noma umsebenzi othize) ukulungisa isigaba esincane esinama-outpoints amaningi.
Ngale ndlela, sithola i-factory yewashi esebenzayo esebenza eduze kokuhle.
Izinkinga kwinhlangano zanoma yiluphi uhlobo zisingathwa ngendlela efanayo.
Lokhu sikubiza ngalezi zenzo ezimbili: